အမေရိကန်နှင့် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကျ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်အပေါ် တောင်ကိုရီးယား မဆုံးဖြတ်ရသေး - Xinhua News Agency
၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ် ၁၂ ရက်က ကိုရီးယားကမ်းခြေ၌ ပြုလုပ်သည့် တောင်ကိုရီးယား-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဆိုးလ် ၊ ဩဂုတ် ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ယခုနှစ်နွေရာသီတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့်အတူ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကျ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်အပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက် မရချရသေးကြောင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဩဂုတ် ၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Boo Seung-chan က အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားရာတွင် နှစ်ပတ်လည် တောင်ကိုရီးယား-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု အစီအစဉ်ကို မည်သည့်အချိန် မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်သွားမည်ကို အပြီးသတ်ဆုံဖြတ်ချက် မချရသေးကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီး တောင်ကိုရီးယား နှင့် အမေရိကန် နှစ်ဖက်အာဏာပိုင်များက ယင်းကိစ္စရပ်ကို ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ကိုရီးယား နှင့် အမေရိကန် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ဩဂုတ်လလယ်ပိုင်း နွေရာသီကာလတွင် နှစ်စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကျဖြစ်ပြီး ယင်းကိုကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲရန် အစမ်းလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုအဖြစ် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြစ်တင်ထားသည်။
တောင်ကိုရီးယား နှင့် အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ၊ နှစ်ဖက်တပ် ပူးပေါင်း ခုခံကာကွယ်ရေးအစီအစဉ် ၊ စစ်ပွဲကာလအတွင်း စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု လွှဲပြောင်းရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလျော့ရဲနေသော ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တွင် သံတမန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု တွန်းအားပေးရေး စသည့် အခြေအနေအရပ်ရပ်အတွက် အနီးကပ်ညှိနှိုင်းဆွေးလျက်ရှိကြောင်း Boo က ဆိုသည်။
မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အလုပ်သမားပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Kim Yo Jong က တောင်ကိုရီးယား နှင့် အမေရိကန် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို “ မလိုလားအပ်သောလုပ်ရပ်တစ်ခု” ဟူ၍ တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းတွင် ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ယင်းမှာ မြောက်ကိုရီးယား နှင့် တောင်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းအတွက် အစိုင်အခဲတစ်ခုဖြစ်စေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းများ ပြန်လည်တပ်ဆင်ခဲ့ခြင်းမှာ “ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ချိတ်ဆက်မှု” တစ်ခုထက် မည်သည့်အရာမျှ မပိုကြောင်း Kim က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တစ်နှစ်ကျော်ကြာဖြတ်တောက်ထားသည့် မြောက်ကိုရီးယား နှင့် တောင်ကိုရီးယားအကြား နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကို ပြီးခဲ့သော ဇူလိုင် ၂၇ ရက်တွင် ပြန်လည်တပ်ဆင်ခဲ့ရာ ယင်းမှာ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ပြေရာပြေကြောင်း မျှော်လင့်ချက်များကို မြင့်မားစေခဲ့ရသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဌာနကြီးကြပ်ရေးမှူး Lee Jong-joo က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားရာ၌ ကိုရီယားကျွန်းဆွယ်တွင် တင်းမာမှုများ မြင့်တက်မလာစေရန်အတွက် ၎င်း၏ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တောင်ကိုရီးယား-အမေရိကန်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို ဉာဏ်အမြော်အမြင် နှင့် ပြုလွယ်ပြောင်းလွယ်သော ကိစ္စရပ်အဖြစ် ညှိနှိုင်းသွားရေးကို ဆက်လက်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တောင်ကိုရီးယားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမည်မဖော်လိုသောအဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးက ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်တွင် ပြည်တွင်းသတင်းထောက်များအား ပြောကြားရာ၌ ကပ်ရောဂါတစ်ကျော့ပြန်ခေါင်းထောင်ခြင်း နှင့် မြောက်ကိုရီးယားနှင့်ညှိနှိုင်းရန် လိုအပ်ခြင်း တို့ကြောင့် နွေရာသီ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်ကို နှောင့်နှေးထားရန်လိုလိမ့်မည်ဟု ဆိုသည်။
ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းလိုင်းများ ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ယင်းမှာ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား ကာလရှည်ကြာ ဆက်ဆံရေး နှင့် နှစ်ဖက် အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု အတွက် ကနဦးစမှတ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၊ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေဖြင့် မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဖုန်းလိုင်းပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းမှတဆင့် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြားဆွေးနွေးပွဲများ ပြန်လည်စတင်ရန် တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်ဆောင်ရန် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်တွင် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအား အဆိုပြုခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းအဆိုပြုချက်အပေါ် မြောက်ကိုရီးယားဖက်က တစ်စုံတစ်ရာ တုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိသေးကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Lee က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
SEOUL, Aug.2(Xinhua) — South Korea’s defense ministry said Monday that no decision had been made yet over the joint annual military exercise with the United States this summer.
Kim Yo Jong, the DPRK’s vice department director of the Central Committee of the Workers’ Party of Korea, said inastatement Sunday night that the South Korea-U.S. joint military drills are “an undesirable prelude” which beclouds the way ahead of the DPRK-South Korea relations.
Kim noted that the restoration of the inter-Korean communication lines should not be taken as anything more than just the “physical reconnection.”
Lee Jong-joo, spokesperson of the South Korean unification ministry in charge of inter-Korean relations, toldapress briefing that the ministry will continue efforts to deal with the South Korea-U.S. military drills inawise and flexible manner so as not to escalate military tensions on the peninsula.
An unnamed high-ranking official of the unification ministry told local reporters last week that it would be “desirable” to delay the summertime joint military exercise given the pandemic resurgence and the need to engage the DPRK.
According to the spokesperson, South Korea proposed last week to the DPRK discussing ways to set up the system for virtual talks between the two Koreas. Pyongyang had yet to respond to the proposal. Enditem
File Photo: South Korean and U.S. soldiers takeaposition during an annual joint military landing exercise in Pohang, on South Korea’s southeast coast, on March 12, 2016. (Xinhua/AFP)